बाढीको वितण्डाले शुक्रबार रातिसम्म लियो १९ जनाको ज्यान
reportersnepal.com . ३ महीना अघि
असार २७, काठमाण्डौ । तीन दिन देखि जारी वर्षापछि बाढी र पहिरोका कारण देशभर १९ जनाको मृत्यु भएको भने ८ जना बेपत्ता भएका छन् । हालसम्म रामेछाप, काभ्रेपलाञ्चोक, भोजपुर, ललितपुर, काठमाडौं, खोटाङ, सिन्ध...
बाढी र पहिरोमा ज्यान गुमाउने ११ पुगे, ८ जना बेपत्ता
काठमाडौँ- निरन्तरको भारी वर्षाका कारण बाढी र पहिरोमा परी देशभर मृत्यु हुनेको संख्या ११ पुगेको छ भने १० जना बेपत्ता छन्। दिउँसो ३ बजेसम्मको अपडेटअनुसार काठमाडौंको मूलपानीमा घरको पर्खाल भत्कँदा एक ब...
बाढी-पहिरोबाट १७ जनाको मृत्यु, ७ जना वेपत्ता
ajakoartha.com . ३ महीना अघि
काठमाडौं– नेपालमा अविरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरोबाट १७ जनाका मृत्यु भएको छ । बिहीबारदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थान बाढी तथा पहिरो गएको छ । काठमाडौंमा वर्षापछि पर्खाल भत्किँदा ३ ज...
निरन्तरको वर्षाले देशभर ६ जनाको मृत्यु, ६ घाइते, तीन जना बेपत्ता
काठमाडौं : निरन्तरको भारी वर्षाका कारण बाढी र पहिरोमा परि देशभर ६ जनाको मृत्यु भएको छ भने तीन जना बेपत्ता छन्। ६ जना घाइते भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। काभ्रेमा दुई, सिन्धुली , पर्सा, ल...
वर्षाका कारण मृत्यु हुनेकाे संख्या १७ पुग्याे, सात बेपत्ता
himalkhabar.com . ३ महीना अघि
अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढी र पहिरोबाट मृत्युहुनेकाे संख्या १७ पुगेकाे छ । सात जना बेपत्ता भएकाे प्रहरीले प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक रमेश थापाले जानकारी दिए । ...
देशैभर बाढी र पहिराेकाे कहर : ८ जनाकाे ज्यान गयाे, ४ जना बेपत्ता
काठमाण्डौ – लगातारको झरीका कारण आएको बाढीपहिरोमा परि ८ जनाको ज्यान गएको छ । त्यस्तै बाढीले बगाएर चार जना हराइरहेका छन् । पहिरोमा पुरिएर भोजपुरमा दुई जनाको ज्यान गएको छ । रामप्रसाद राई गाउँपालिका ...
बाढी पहिरो : १६ जनाको मृत्यु, ८ घाइते, ५ बेपत्ता
काठमाडौं : दुईदिन देखिको लगातार वर्षाका कारण देशका विभिन्न भाग बाढी पहिरोको मारमा पहिरहेका छन्। नेपाल प्रहरीले शुक्रबार साँझ जारी गरेका सूचनाअनुसार हालसम्म बाढी पहिरोमा परी देशभर १६ जनाको मृत्यु भए...
काठमाण्डौ – लगातारको झरीका कारण आएको बाढी पहिरोमा परि १७ जनाको ज्यान गएको छ । बाढी पहिरोमा परि ७ जना बेपत्ता भएका छन् । त्यस्तै बाढी पहिरोमा परि ७ जना घाइते भएका छन् । काठमाण्डौमा एकै परिवारका ३ ...
बाढी र पहिरोमा ज्यान गुमाउनेको संख्या १६ पुग्यो (नामसहित)
काठमाडौँ- निरन्तरको भारी वर्षाका कारण बाढी र पहिरोमा परी देशभर मृत्यु हुनेको संख्या १६ पुगेको छ। काभ्रेको बनेपा-३ चुनातालमा घरलाई पहिरोले थिच्दा ५५ वर्षीया गोमा दंगाल र ७ वर्षीया सोहनी दंगालको ज्य...
बाढी पहिरोका कारण देशभर १४ जनाको ज्यान गयो, कुन् जिल्लामा कति ?
hamrakura.com . ३ महीना अघि
काठमाडौं । अविरल वर्षापछि गएको बाढी पहिरोका कारण देशभरका विभिन्न जिल्लामा १२ जनाको ज्यान गएको छ । शुक्रबारमात्रै विभिन्न जिल्लामा ११ जनाको ज्यान गएको थियो भने बिहीबार पहिरोको कारण नै थप एक जनाको ज्...
वर्षापछिको क्षति: १७ को ज्यान गयो, सात बेपत्ता
saralpatrika.com . ३ महीना अघि
काठमाडौं । अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढी, पहिरोबाट अहिलेसम्म १७ जनाको ज्यान गएको छ । सात बेपत्ता भएका छन् भने चार जनाको उद्धार गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक र...